musha > Travel Europe > Quick Guide: How To Travel Cinque Terre By Train
Italy ndiyo imwe yenzvimbo dzine mukurumbira mushanyi dzokugara munyika. Vanhu makwai kuti nyika nokuda naka chikafu, tsika nemagariro, uye akapfuma munhoroondo. Saizvozvo, haufaniri kunyange kushanyira maguta makuru kuwana nemazango kweItaly. Muenzaniso wakanaka izvi dzinonyengedza chakati iyo Italian Riviera aizivikanwa Cinque Terre. Chinhu mukurumbira rwendo nokuti vanhu vanoda kufadzwa reMediterranean mhenderekedzo yegungwa uye patsanura kubva anoshungurudza kumhanya upenyu ano. Nepo kune yakawanda oga nemisha pamusoro kumiganhu Italy, misha Cinque Terre vari nokure kupfuura mukurumbira. Nokuda kufarira ichi naka rwendo, Save A Train akaisa pamwechete chikurumidza.
Sei Go By Train?
vashanyi vakawanda kuti mukasaatarira Cinque Terre vangashamisika kuti nei chitima ndiyo yakanakisisa nezvechisarudzo. Kurenda motokari uye kutyaira uyu munharaunda norugare rinonzwika nani, rudyi? Wrong. Kuti tinzwisise kuti nei zvisingaiti, zvakakosha kuziva chii inoumba Cinque Terre. Cinque Terre anonyanya rinoumbwa mumisha shanu hove, richizonzi (munyika shanu). Misha iyi ndiyo Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, uye Monterosso unto Mare. Vaiva pakutanga nematende mashanu tuduku munharaunda vakavapoteredza. To tipone, Misha iyi akatora chikamu hove uye kurima. The Misha vaiva, kusvikira ichangopfuura, zvakabatana ne Hiking nzira uye vakanga unongosvikika rails kana gungwa.
misha ava handichagarizve voga sezvo vakanga apfuura. zvisinei, ivo vachiri kuramba kure kunzwa kuti vakawanda vanonakidzwa. Migwagwa vari zvichiita kuti vamwe nemisha ikozvino, asi havana yakamanikana zvikuru uye kunogona kuva rwendo ngozi vaya itsva kumigwagwa. Kana wasvika misha nemotokari, hamungambovi kukwanisa kufamba pakati pavo nemotokari. Kuti tidzivise chero ngozi uye kuzvuzvungudza, zvakanakisisa kushanyira misha pamwe zvikuru yakakunakira gadziriro pakufamba nezvitima.
Chii chaungatarisira From The Cinque Terre Train Line?
The Cinque Terre chitima mutsetse ane dzokuzororera nhanhatu. Unorudzi kwamira izvi ndizvo La Spezia (chakagadzirwa zvokufambisa nomusimboti munharaunda), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, uye ipapo pakupedzisira Levanto. Nzendo ava pfupi uye haufaniri kutora kuti nguva yakawanda. Rwendo rwokubva La Spezia kuna Riomaggiore zvinotora pamusoro 10 maminitsi. Yenzendo pakati Cinque Terre maguta zvava 5 maminitsi neimwe. nezvitima izvi enda kuburikidza kwasviba tunnels kuti musi kuna 1870s. Zviri inonakidza chiitiko achipfuura murima pakarepo kuona kupenya uye dzinokatyamadza maonero of the Mediterranean.
nezvitima izvi hazvina kakawanda kutarisira somunhu kuti kupiwa chinhambwe pakati dzokugara. Kazhinji mhanya kamwe ose awa, asi izvi zvinogona anosiyana kubva nguva nenguva. zvisinei, nguva dzose zvakanaka kukumbira yekuwedzera ruzivo rwekufamba kana kutenga tikiti renyu. Kuwedzera nokuziva papurogiramu uye kufamba nguva ino chitima nzira, zvinokosha kuti hunotsigira matikiti dzenyu. Pane chivimbo chakasimba michina muchitima platforms kuti unogona kushandisa. All iwe kuita Vaiisa rakamanikana kuguma tikiti kupinda slots duku yeyero muchina uye kumirira kunzwa chidhindo.
Riomaggiore achava kana kuva chemabhazi wokutanga (kana uri kuenda kubva La Spezia) kana wechishanu chemabhazi (kana uri kuenda kubva Levanto). zvisinei, zviri kwazvo zvichida kuenda kuva chemabhazi nevakawanda Cinque Terre Vashanyi okutanga, sezvo ndiyo uchitsanya nzira kuti ikoko. Riomaggiore ndiko kuri dzemisha shanu, uye ndicho ndibatsireiwo guta kubva paka hofisi huru aripo. The zvivako vakahwanda zvose pamusoro mawere goronga, nzira yose kusvikira kaduku chiteshi. Pachimiro peeling Wedding dzimba ndiyo wakajeka uye tichagara mupfungwa dzako nokusingaperi. Zviri tarenda kuona kuona zuva ranyura, and it is a must-see for couples that want to share a special moment.
La Spezia kuna Riomaggiore Zvitima
Florence kuna Riomaggiore Zvitima
Modena kuna Riomaggiore Zvitima
Livorno kuna Riomaggiore Zvitima
Manarola ari Petit musha sokuti teura pasi kupinda Cinque Terre nemhenderekedzo pakutanga kuona. The fungidziro kuti cascading mavara zvivako chinhu akanaka pameso. Zviri akakwana musanganiswa Italian tsika uye kuenzana hunhu. Kamwe iwe tora muna yakanaka maonero, unogona dzinotibatsira musha. Manarola ane chiteshi kaduku kuti ine chikepe ndokudzikunda uye kushambira buri. Ndizvo nzvimbo yakakwana kutora dzinoshambira uye kudzidzira zvimwe pamawere Diving. Vachifambidzana chiteshi vari zvikepe hove dzakawanda ndezvaJehovha vagari Manarola. Tsika ndibate uye kudya hove achiri mupenyu uye vachibudirira mumusha.
La Spezia kuna Manarola Zvitima
Riomaggiore kuna Manarola Zvitima
Sarzana kuna Manarola Zvitima
Levanto kuna Manarola Zvitima
Mumwe nemumwe wemisha mishanu une runako rwakati. Corniglia yakakosha sezvo haisi building. zvisinei, chii isina mu mahombekombe, kupfuura inoumba nokuti vayo akasiyana runako. Corniglia anonzwa ari kure kupfuura ivo mimwe misha. zvisinei, rinopa mamwe ndagadzikana uye nemakanzuru mhepo. The musha chinowanzofuratirwa ayo rwakaoma mudungwe munzira. Kusiyana nevamwe misha kuti ingasvikwa nechikepe, Corniglia iri pamusoro pamusoro pezvikomo uye haina mukana wegungwa. The chete nzira kusvika kune hike ari Cinque Terre nzira kana kuti kutora chitima. zvisinei, zvinokosha kucherechedza kuti chitima haringapembedzi iwe chero panyama nesimba. Uchiri kufanira kufamba mamwe masitepisi kuti usvike pakuru yemusha uye uone zvese zvinopihwa nemusha mudiki.
Corniglia ane maonero akanaka izvo zvinoita kuti iwe uone akawanda emakomo akakomberedza uye makuru nyanza. The Belvedere mumusha inzvimbo huru kuenda uye kutora kunaka Cinque Terre. Kamwe ukaita kuti unogona kunakidzwa siyana mumusha inopiwa, kubva zvinoshamisa pesto kune zvinonaka waini. Corniglia ane akapfuma nhoroondo kuita waini, uye kana uri rombo zvakakwana kuti kushamwaridzana veko, unokwanisa kuravidza uye kudzidza pamusoro waini yavo.
La Spezia kuna Corniglia Zvitima
Florence kuna Corniglia Zvitima
Manarola kuna Corniglia Zvitima
Levant kuna Corniglia Zvitima
Vernazza runoonekwa somumwe misha yakaisvonaka kwazvo kwete chete Cinque Terre, asi nyika yose Italy. zvirokwazvo ndiro yokupedzisira rine Cinque Terre kuti chinoita vazhinji adanane murwendo. It ane zvimwe kwezvokufuka uye zvetsika vanofunga kuti vamwe misha kushaiwei. Sanganisa icho pamwe nechikafu chakasarudzika uye zvinotyisa kuona, uye iwe kuwana nzvimbo anovimbisa kechipiri. Ivai nechokwadi kushanyira Doria Castle apo muna Vernazza. Rine rimwe rokupedzisira shongwe yepakutanga kuti akadzivirira vanhu musha emakore apfuura.
Corniglia kuna Vernazza Zvitima
Florence kuna Vernazza Zvitima
Bologna kuna Vernazza Zvitima
Riomaggiore kuna Vernazza Zvitima
Monterosso unto Mare zvechokwadi kupfuura touristy uye dzisina-kufanana guta riri Cinque Terre. It ane motokari, Hotels, uye hurungudo mahombekombe akakwana kune vashanyi. Kana uchida kushanyira ichi zvinoshamisa chikamu Italy, asi vanosarudza munhu vibe zvikuru ano, ipapo Monterosso ndechenyu. Monterosso ane promenade kuti akakwana kuti manheru rinofamba, uye kunyange nani, vane dzokudyira yakanaka kuti achaita munhu vanonakidzwa zvomugungwa.
Sezvaunogona kuona, Cinque Terre anezvakawanda kupa vaenzi kuti vanoda kusangana rakasiyana Italian ruzivo. It ane misha yakasiyana shanu kuti anovimbisa chisingakanganwiki ruzivo. Book A Ticket nokuda Train yenyu uye ita kuti uwane chiitiko chakasiyana nechero chipi zvacho.
Unoda embed yedu Blog romukova “Quick Guide: How To Travel Cinque Terre By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-cinque-terre-train%2F%3Flang%3Dsn – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
cinqueterre europetrains europetravel eurotrip trainjourney Tranride chitima mazano travelitaly